Igumbi lokulala lesimanje Elibanzi eli-3, Eduze Nezintaba! - I-Airbnb
Igumbi lokulala lesimanje Elibanzi eli-3, Eduze Nezintaba!
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Japhia
U-Japhia Ungumbungazi ovelele
I-adventure ilindelwe kuleli khaya elikhanyayo, eliyinkimbinkimbi nelivulekile. Kungakhathaliseki ukuthi ufika emithambekeni e-Castle Mountain Ski Resort, uhamba ngezinyawo e-Waterton National Park, udoba imifula nemifudlana esezingeni lomhlaba endaweni noma ufuna ukubaleka buthule edolobheni elikhulu, le ndawo enhle enkabeni ye-Pincher Creek okufunayo. Eduze nezindlela zokuhamba zomfula kanye nesitolo sekhofi esihle, noma ngabe yisiphi isizathu sokuhlala kwakho, ngeke ufune ukuhamba.
Leli gumbi lokulala eli-3 elilungiswe ngokuphelele, i-2.5-bathroom 1500sqft main floor suite linendawo eningi yakho nomndeni wakho.
Imishayo nophahla oluvalekile kunikeza isikhala esimangalisayo esihle kakhulu sokuphumula nokuvakasha. Noma ngabe upheka ekhishini noma udlala imidlalo egumbini lokuhlala, umuzwa ovulekile usho ukuthi ngeke uphuthelwe yinoma yisiphi isenzo.
Indawo yokuhlala eyinhloko ifudumele futhi iyamema ngenxa yamafasitela amaningi ekamelweni elikhulu. Izimpumputhe zokuhlunga ukukhanya ezisezingeni eliphezulu phezulu phansi zivumela ukukhanya kwemvelo ukuthi kungene kodwa zikunikeza ubumfihlo obufunayo. Kunempahla eminingi emihle endaweni yokuhlala eyinhloko kufaka phakathi amakhabethe enziwe ngokwezifiso, izibani zesimanje kanye ne-premium flooring. Thokozela eduze komlilo wegesi yemvelo egumbini lokuhlala ngemva kosuku olunzima lokufunda incwadi noma ukubuka i-TV ku-50” Smart TV yethu ene-Netflix, Disney+, SportsnetNOW+ ne-Amazon Prime.
Ikhishi lethu elisha lesimanje neliyinkimbinkimbi linefriji, isitofu, imicrowave kanye nomshini wokuwasha izitsha. Kukhona iwindi elikhulu le-bay lokukhanya okuningi kwemvelo, ama-granite countertops anendawo yokudlela ye-peninsula nazo zonke izinsiza. Ukuthi uyathanda ukupheka noma ufuna nje ukuphonsa ipizza eqandisiwe, leli khishi linakho konke okudingayo. Sinayo yonke into ebesicabanga ukuthi ungase uyidinge kusukela emabhodweni namapani, i-toaster, igedlela likagesi ngisho namapuleti ezingane, izitsha nezinkomishi. Ngenxa yokuthi siyalithanda ikhofi, sikunikeze zonke izinkomishi ze-K ongaziphuza. Sinikeza i-grinder yekhofi nokucindezela kwe-french nganoma yisiphi isikhathi noma nini lapho uthanda i-java yakho.
Uhamba nomunye umbhangqwana? Asikho isidingo sokudlala i-rock-paper-scissors ye-master suite njengoba le ndawo ingenayo eyodwa, kodwa amakamelo okulala amabili amakhulu ngalinye line-ensuite yalo enhle. Igumbi lokulala elikhulu kunawo amabili aphambili linombhede wenkosi enamalineni aphambili kanye nomatilasi wegwebu wenkumbulo onethezeke kakhulu owake wawulalisa. Iphinde ibe nekhabethe lokungena elinelinye ikhabethe elikhulu lokugcina imithwalo nezimpahla ezilengayo, amakhethini amnyama kanye ne-smart LED TV efakwe odongeni. Ngaphezu kwe-ensuite, leli gumbi lifakwe usinki oyimpushana, amathayela alula ahamba ngaphansi komhlaba, isibuko se-LED kanye nekhawunta ye-granite.
Igumbi lokulala eliyinhloko elincane, kodwa elingenabukhazikhazi linombhede wendlovukazi onomatilasi wegwebu lenkumbulo omangalisayo, amalineni ekhwalithi kanye ne-ensuite yesimanje futhi enamathayela amnandi. Kukhona ikhabethe elikhulu ukuze yonke imithwalo yakho ihlale ihlelekile futhi iphume endleleni.
Igumbi lokulala lesithathu linikeza izinto eziningi zokuklama ezifanayo njengamanye. Leli gumbi linombhede olala phansi onombhede ophindwe kabili phansi kanye nowodwa phezulu ngalinye elinomatilasi begwebu benkumbulo ephezulu. Umkhiqizi uncoma isisindo esikhulu esingu-165lbs kubhaki engaphezulu. Leli gumbi elibheke empumalanga linikeza ukubukwa okuhle ekuseni kodwa ngokuvala okumnyama ukulala kwakho kuzoqiniseka ukuthi ngeke kuphazamiseke.
Ukuhamba nezingane kungaba nzima. Ungakhathazeki nathi sinezingane. Siyazi ukuthi kungaba inselele ukufaka zonke izinto zabo emotweni yakho. Hhayi-ke, shiya isihlalo esiphezulu nendawo yokudlala ekhaya futhi sikunikeze zona.
Lapho ungena ungase ubone igumbi elikhulu lokugcina elingenalutho kwesokudla sakho. Sikubekele lokho kuwo wonke amathuluzi akho. Sinemishini ebizayo nemishini futhi sicabanga ukuthi eyakho ibaluleke ngendlela efanayo nakuwe. Noma ngabe yisiphi isikhathi nesizini sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi igiya lakho liphephile futhi liphilile. Letha izinto zakho ze-hockey, izicathulo zeqhwa, ukushushuluza eqhweni, i-snowboard, igiya lokuqwala izintaba, okokusebenza kokudoba, ukumisa amatende nanoma yini enye esemotweni yakho futhi uyishiye endlini yethu yokugcina engenandaba lapho izovikeleka futhi izwakale khona.
Indawo yokuwasha inikeza isikhala sokuhlunga, ukugoqa nokulengisa izingubo zakho. Gcwalisa ngewasha, isomisi, insimbi kanye nebhodi loku-ayina sizoqinisekisa ukuthi ubukeka futhi uzizwa ungcono kunanoma yisiphi isenzakalo. Kukhona ukugeza okuhhafu ngaphandle kwegumbi lokuwasha ukuze kube lula kuwe futhi.
I-suite inamadekhi angu-2 amahle ongawajabulela. Indawo ebheke empumalanga yinhle kulabo abavuka ekuseni abajabulela inkomishi eshisayo yekhofi futhi babambe imibala yokuphuma kwelanga okuhle kwe-Southern Alberta njengoba beqa amagquma asempumalanga yedolobha futhi bakhanyisela izinjini zomoya eziningi ezidumile endaweni. Idekhi eseningizimu ilungele ukuphumula kusihlwa sasehlobo futhi ujabulele iphunga lezihlahla eziningi ze-lilac. Iyimfihlo futhi ivikelekile emoyeni naselanga futhi iyindawo enhle yokuphumula ebusika obude behlobo. Kukhona indawo yokushisa ye-BBQ kanye ne-propane firepit emphemeni ukuze ukwazi ukwenza ama-smores ihlobo lonke.
Igceke elingemuva liyindawo eluhlaza okwabelwana ngayo enotshani obuningi obucwebezelayo.
Indawo yokungena ingena ngekhiphedi engathinteki enekhodi yakho siqu. I-carport yezimoto ezimbili yenza indawo yokupaka enhle evikelekile. Igumbi lokugezela eli-2 elingaphansi kwegumbi lokugezela eli-1 liqashwa ngokuhlukana futhi linewasha nelokungena elihlukene. Ukuvikela okuphephile nokuzwakalayo kufakwe phakathi kwaphansi ukuze kuvikelwe umsindo ongeziwe.
-Awukho ukubhema noma yini/noma yikuphi emagcekeni (ngaphakathi noma ngaphandle), AKUKHO izilwane ezifuywayo, AKUKHO phathi, AKUKHO imisebenzi (izivakashi akufanele zibambe abantu abengeziwe ngaphandle kwemvume evela kubabungazi).
-Indawo yokupaka: Izihambeli ezisezingeni eliphezulu ziyakwazi ukufinyelela ku-suite ngokusebenzisa i-carport emboziwe. Kunezindawo eziningi zokupaka emgwaqweni kanye nezindawo eziningi zokupaka emigwaqweni kuFrederick Street.
-Wonke amakamelo okulala nezindawo zokuhlala zifaka umlilo oxhumene kanye nomtshina we-CO.
Noma ngabe lokhu okokuzizwisa kwakho kokuqala noma kwamashumi amahlanu nge-AirBnb, silwela ukwenza lokhu kube okuhle kakhulu. Siyatholakala ukuze siphendule noma imiphi imibuzo noma ukukhathazeka okungenzeka ube nakho endleleni. Sicela uqaphele ukuthi sidinga abangaba izihambeli ukuthi babuyekeze Imithetho Yendlu yethu futhi basinikeze imininingwane embalwa ngaphambi kokwamukela noma ukugunyaza kusengaphambili ukubhukha. Ezinye zezinto esithanda ukuzazi zihlanganisa:
- Kungani uza e-Pincher Creek?
- Uzobe uhamba nobani (izingane, abadala, njll)?
- Ingabe unazo izicelo ezikhethekile (okungukuthi, indawo yokudlala, isihlalo esiphezulu, njll)?
Singase futhi sicele ikhophi ye-ID yesithombe (isb. Ilayisensi Yokushayela) ehambisana negama elisekhadini lesikweletu elisetshenziselwa ukubhukha iholide. Lokhu kuwusizo kakhulu kithi uma ungenakho ukubukezwa kwababungazi abadlule noma uma iphrofayela yakho intula imininingwane "yokuqinisekisa" evela kumnikezeli wewebhusayithi. Uhambo lwakho lungakhanselwa uma lokhu kucelwe ababungazi futhi kunganikezwanga.
I-HDTV engu-52" ene- I-Amazon Prime Video, Disney+, Fire TV, I-Netflix
Bheka lezi zindawo ezinhle zonke ezingaphakathi kwehora elingu-1/2 lokushayela.
I-Waterton National Park
I-Castle Mountain Ski Resort
I-Castle Provincial Park
Bheka incwadi yethu yezokuvakasha yangokwezifiso etholakala endaweni yethu ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngalezi zindawo.
Sihlala sitholakala kunoma yini oyidingayo, vele usithumelele umlayezo futhi sizokwenza okusemandleni ethu ukusiza ngezidingo zakho.
UJaphia Ungumbungazi ovelele